Fadhiga & Guddoomiyeyaasha - Shiinaha Gormeet caaga
habka wax taaj oo kale afuufa ayaa sidoo kale si weyn loo isticmaali in kuraasta soo saara, badeecada ayaa xasilooni kiimikada, acid, anti-guurto ah, qabow iyo kulayl u adkaysta, xasiloonida midabka, fududahay in la rakibo iyo maarayn. inta badan Waxaa jira laba nooc oo ah waxyaabaha our: kuraasta gaariga ilmaha, kuraasta isticmaalka caadiga ah. kuraasta baabuurta Baby, kuraasta kor Haddii safarada gaaban ama safar dheer, kuraasta baabuurta waa waxyaabaha lagama maarmaanka ah ee carruurta, kuraasta badbaadada carruurta ayaa loo arkaa in ay mid ka mid ah siyaabaha ugu wax ku ool ah si looga hortago in caruurta ka si lama filaan ah dhaawac ...
habka wax taaj oo kale afuufa ayaa sidoo kale si weyn loo isticmaali in kuraasta soo saara, badeecada ayaa xasilooni kiimikada, acid, anti-guurto ah, qabow iyo kulayl u adkaysta, xasiloonida midabka, fududahay in la rakibo iyo maarayn.
inta badan Waxaa jira laba nooc oo ah waxyaabaha our: kuraasta gaariga ilmaha, kuraasta isticmaalka caadiga ah.
kuraasta baabuurta Baby, kuraasta kor
Haddii safarada gaaban ama safar dheer, kuraasta baabuurta waa waxyaabaha lagama maarmaanka ah ee carruurta, kuraasta badbaadada carruurta ayaa loo arkaa in ay mid ka mid ah siyaabaha ugu wax ku ool ah si looga hortago in caruurta ka si lama filaan ah dhaawac shilalka gaadiidka.
Waxaan bixinaa kuraasta baabuurta ee loogu talagalay da 'kasta, ka kuraasta gaariga ilmaha dhashay in kuraasta kor loogu talagalay carruurta waaweyn.
· Made of HDPE asalka ah
oo dhumucdiisuna waxay direyska oo Amaanada xoog
Dhexdhexaad inay sare kelli, iyadoo saameynta si fiican iska caabin
soo saari karaa qaab dhismeedka caag ah oo keliya, ama soo ururay oo dhan qaybaha si ay u sameeyaan waxyaabaha dhamaystirtay.
Isticmaal Common Guddoomiyeyaasha
Waxaan astaysto dhismeedka kursi sida ay shaqo aad u baahan tahay, oo waxaan ka dhigi un-doorinaynaa inay taam u qayb kale oo ka mid ah badeecada, tusaale ahaan, la cuskado, dhabar iyo wixii la mid ah. habka Our hufan koontarooli karaan size inta lagu jiro saarka dulqaadka ogolyahay gudahood, oo had iyo jeer si fiican u samayn in ay gacanta ku midabada u dhexeeya yaalla oo kala duwan.
Kuraasta lagu textured kartaa meelaha & in qaabab kala duwan, tirada, midabada & adag.